raha tsy hilaza afatsy ny olan’ny anjerimanontolo sy ireo mpandraharaha amin’ny asa vaventy nanao làlana, izay mitaraina fa herintaona izao tsy azo ny volany. Tsy arakaraka ny kisehoseho etsy sy eroa, fa tena mandalo krizy ny firenena, bokan-trosa ny Fanjakana. Nahoana anefa no mahita 77 miliara dolara (280 miliara Ar eo ho eo) nomena ny sinoa tamin’ny fanamboarana ny Kianja Barea fa rehefa ny orinasa Malagasy dia fitahina tsy homena ny volany? Maro ny sehatra misy olana: tontolon’ny fanaovan-gazety mandalo krizy ka voatonontonona ho fositra ny fitsabahan’ny tompon’andraikitra ara-panjakana, ny Air Madagascar mibaby trosa 72 tapitrisa dolara, ny Jirama tsy milamina hatramin’izao ary mampikolay vahoaka ny toa endrika kajikajy ara-bola midangana mianjady amin’ny mpanjifa, ny KRAOMA tsy mahazo karama, ny SECREN mitaky karama septambra, bokan-trosa 43 miliara Ar amin’ny vidin-tsolika ny fitondrana,… Ny resaka fifehezana ny vidim-piainana nambara ho tsapa ao anatin’ny 3 andro toa vahaolana petatoko vao mainka mampikorosy fahana ny toekarena,… Ny Filoha izao no milaza fa raha 3500dolara ny saran’ny fitaterana kaontenera iray, kanefa niakatra 10 000 dolara saingy mbola sahiny ny milaza fa fandrosoana ny fanafarana entana ilaina andavanandro izay vao mainka mampitotongana ny ariary. Mahavita miteniteny foana tsy am-pisainana na tsy fahalalana mihitsy ireny hoe: hiandry vary 2 taona vao ho vokatra ve? Tsy hoe tsy ilaina ny fanafarana, fa mila mazava ny politikam-pamokarana hialana tsikelikely aminy. Ny ara-poliitika, maro ireo olon’ny fitondrana efa mipiripirina ary misy ny manomboka manontsana Fanjakana,… Asa rehefa iza no higrevy vao ho taitra sy hanaiky fa tena ambony lavitra noho ny fahombiazana ny lavaka mandifotry ny tsy fahaiza-mitantana? Ekena fa mandeha ny fitokanan-javatra, mahita hevitra hisehosehoana foana, tena marina fa mamoaka makety vaovao matetika, tsy lavina ny fisiana fampanantenana sesilany,… Azo lazaina ho madinidinika mety zakan’ny tetibolan’ny minisitera miantsoroka ny tetikasa ny fotodrafitrasa sasany. Mampametra-panontaniana kosa hoe: karaman’ny mpandrahan’ny oniversite sy ny volan’ny orinasa mpanao làlana izay tokony handeha ho azy sy efa milamina ao anaty tetibolam-panjakana aza efa gidagidra vao azo, ka vola avy aiza no hanaovana ireo tetikasa amina miliara dolara ?